2021 Lokon'ny efitrano fandroana miaraka amin'ny, manaova veloma ny estetika "eto an-tany", avelao hiakatra ny lokon'ny "lokony"!
Home / Blog / 2021 Lokon'ny fandroana miaraka amin'ny, manaova veloma ny estetika "eto an-tany", avelao "handoko" ny tranonao!
2021 Lokon'ny fandroana miaraka amin'ny, manaova veloma ny estetika "eto an-tany", avelao "handoko" ny tranonao!
2021 / 03 / 29 FisokajianaBlog 8923 0
Ny haingon-trano amin'ny sary mandaitra indrindra amin'ny fandroana, ny maodely vita amin'ny tanety dia mety hanimba ny atmosfera avy hatrany. Raha manana fitarainana momba ireo tile efa lany daty sy trotraka eny an-tsena ianao, ity olana ity dia mizara taila tsotra vitsivitsy amin'ny programa izahay, mety ho mendrika ny handeha hividy fifanoherana roa. Raha ny marina, ny haingon-trano tsara tarehy matetika no tsotra indrindra.
Ny taila kely sy salantsalany fotsy sy mahitsizoro dia mety amin'ny famoronana rivo-piainana vaovao sy mamiratra ary feno. ▼
Ny taila efamira lehibe dia atmosfera kokoa ary mety amin'ny trano fandroana misy toerana malalaka. ▼
Raha tianao ny toerana fotsy fa tsy te-ho monotonous loatra ianao dia afaka mampiasa endrika tile isan-karazany amin'ny faritra samihafa. ▼
Ny fandroana mainty sy fotsy dia mahazatra kokoa raha mampiasa mainty ho an'ny gorodona na valindrihana. Kely matetika ny toerana fandroana, ny rindrina misy mainty madio dia handreraka kokoa. ▼
Tora-pasika vita amin'ny boaty fotsy, ny tapany ambony amin'ny sary hosodoko tonga mainty madio. ▼
Ny fotsy + fotsy dia malefaka kokoa. ▼
Rindrina simenitra fotsy sy fotsy + taila vita amin'ny simenitra. ▼
Taila vita amin'ny gorodona mainty. ▼
Ny manga sy ny mainty dia lalina ary manome fahatsapana filaminana ho an'ny olona. ▼
Ubila mozika maitso sokay. ▼
Ny taila vita amin'ny hazan-trondro cyan dia manome ny fiheverana ny maha akaikin'ny ranomasina azy. ▼
Ny paozin'ny fanjana trondro manga any an-danitra dia manonofinofy kokoa sy toy ny zaza, amin'ity atmosfera ity dia mety hampirisika ny saina kokoa, aingam-panahy avy mandro na zavatra hafa. ▼
Ny taila fotsy ho an'ny rindrina sy ny taila maodelina ho an'ny gorodona dia fitambarana azo antoka kokoa, izay manome ny fahatsapana ho mavesatra indrindra amin'ny sary. ▼
Ny vokatry ny taila voninkazo matanjaka dia mety ho mety amin'ny rindrina hanaovana ravaka. Tandremo ny toerana fotsy, raha tsy izany dia mikorontana loatra ary manelingelina ny eritreritra milamina rehefa mandro. ▼
Ny lamina miloko mavesatra dia mila atsangana amin'ny fotsy. ▼
Taila fotsy maivana misy loko maivana, ary taila fotsy misy fangaro miaraka, voajanahary koa ny tetezamita. ▼
Mazava ho azy, ny taila vita amin'ny endriny manerana ny rindrina, dia tsara tarehy ihany koa. Fa noho ny habakabaka dia asaina mifidy loko maivana kokoa. ▼
Ny taila géometrika dia tsotra, mamiratra ary manan-karena endrika, ary koa safidy mahazatra ho an'ny taila fandroana.
Torozoro telozoro + loko matevina + dian-kapoka mainty sy fotsy. ▼
Tora-telozoro mainty, fotsy ary maitso, voahidy tsara amin'ny lalana iray ihany. ▼
Manakorontana ny làlan'ny fandaminana, fa tsara tarehy koa. Navy + fotsy fotsy, safidy miloko marevaka sy milamina kokoa. ▼
Ny lamina geometrika telo-habe dia manan-karena maoderina. ▼
Previous :: Inona avy ireo taila fandroana malaza 2021 miaraka amin'ilay programa? Ireto endrika, fitaovana ary loko ireto, miaraka amin'ny taona vitsivitsy dia tsy lany andro! Next: Loko avo lenta toy izany, Toerana fandroana toy ny hip tokoa!